Ny Tsipika Manify Manasaraka Ny Sivana Politika Sy Ny Ady Manohitra Ny Vaovao Diso Any Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2016 17:30 GMT
Araka ny nambaran‘ny Tasnim News, masoivohom-baovao iray miankina amin'ny Mpiambina Revolisionera, nanao ny fanambarana tao amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nandritra ny Kaonferansa Nasionaly momba ny Raharaham-bahoaka ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao, Teknolojia ary ny Fifandraisana (TIC) Iraniana, Mahmoud Vaezi. Notanisain'i Vaezi ny loza ateraky ny fatsom-baovao tsy ofisialy” any ambanivohitra sy ireo faritra tsy dia mandroso ao Iran, toerana izay ny vaovao diso sy ampiasaina amin'ny tsy izy no mahasarika mpihaino betsaka.
Ireo sasany mpandinika ny politika aza nilaza ny fampiasan'ny reformista manan-tsaina ny fantsona Telegram narahana onjam-pandresena tamin'ny fifidianana palemantera tao Iran tamin'ny 2016. Vao mainka koa manaitra ny fandresen'ny reformista, noho ny fifampiandaniana ara-politika mahazatra ao amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana ao Iran nibahana nanerana ny firenena, toy ny Fandefasana Sary sy Feon'ny Repoblika Islamikan'i Iran (IRIB).
Nilaza ny governemanta tamn'ny Jolay 2015 fa tsy hanivana ny Telegram izy ireo na misy votoaty mahamenatra aza ao amin'ilay sehatra, fa hiara-hiasa amin'ny Telegram kosa ho solon'izany mba handrondràna azy. Nandà mafy izany fiampangana izany ny mpanorina ilay orinasa sady Tale Jeneraly. Ny Janoary 2016, tao amin'ny fivorian'ny komity mpanivana, nanapa-kevitra hanohitra ny fanivanana ny Telegram ny governemanta, na izany aza, indray andro tamin'ny volana May 2016, nanambara ny Filankevitra Ambony momba ny Habaky ny Serasera fa ireo sehatra rehetra maniry ny mbola te-ho azo idirana ao Iran dia manana herintaona mba hamerina ny lohamilin'izy ireo ao anatin'ny faritr'i Iran. Tsy mazava na hanaraka izany ireo orinasa mikirakira teknolojia toy ny Telegram, na hotohizan'ny governemanta ny fanivanana raha tsy hajaina ilay fangatahana.
Na inona na inona, tamin'ny lasa dia efa vitan'ireo Iraniana manampahefana ny nitady sy nisambotra ny sasany tamin'ireo mpandrindra ny fantsona Telegram. Tamin'ny Novambra 2015, 20 mahery ireo mpandrindra vondrona tao amin'ny Telegram no nosamborin'ny polisy noho ny fanelezana “votoaty mahamenatra.” Nijirika kaonty maro tao amin'ny Telegram koa ireo Iraniana manampahefana, tamin'ny alalan'ny fipaingorana ireo hafatra an-tsoratra ampiasaina amin'ireo fanamarihana mandalo dingana roa ao amin'ilay tolotra.
Na mazava aza ny maha-zava-doza ny sivana ara-politika, miasa manohitra ny tena loza mitatao apetraky ny vaovao diso koa ireo Iraniana manampahefana. Tahaka ny tantara sandoka ao amin'ny Facebook izay mety ho nisy fiantraikany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena vao haingana tany Etazonia, voaloton’ny vaovao diso nivezivezy tao amin'ny Telegram ny tontolon'ny fampahalalam-baovao ao Iran.
Tamin'ny 22 Novambra, nanomboka niparitaka ny vaovao sandoka tao amin'ny fantson'ny Telegram Iraniana hoe olona 27 no maty tao aminà krizinà fakàna takalon'aina tao amin'ny tsenam-barotra iray ao afovoan'i Teheran. Hita avy eo hoe sary nolazaina fa nalaina taminà fiofanan'ny polisy efa ela. Niseho tao amin'ny gazety tony mpandala ny nentin-drazana Tabnak ilay tantara.
Sary niseho tao amin'ny fantsona Telegram Iraniana tamin'ny Jona 2015 mampiseho filazana iray avy amin'ny Polisin'ny serasera Iraniana (ATA) mampitadrina mpampiasa tsy fantatra anarana noho ny asa Telegram tsy araka ny lalàna. Nandà avy hatrany ny filohan'ny FATA, nilaza fa tsy nandefa hafatra toy izany mihitsy ny polisin'ny serasera. Tsy nisy na iray aza nanome porofo hoe naharay hafatra tahàka izany, ary ny adiresy IP tsy mandeha ilay nozaraina tao amin'ny hafatra. Heverina fa avy aminà fantsona iray milaza ny tenany ho fantsona Telegram ofisialin'ny polisin'ny serasera ilay hafatra.